Home » သတင်း » FuseFX နယူးတီဗီစီးရီးနဲ့အတူ Hot လျက်ရှိနေမည်
FuseFX နယူးတီဗီစီးရီးနဲ့အတူ Hot လျက်ရှိနေမည်
Los Angeles-FuseFX ဒီနွေဦးပြသဖို့ရာအသစ်နှင့်ပြန်ရုပ်သံစီးရီးတစ်ခုကျယ်ပြန့်, များအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုများပေးနေပါသည်။ ၎င်း၏စတူဒီယိုထဲကနေစီမံကိန်းများ Los Angeles မြို့, AMC, Starz !, Netflix နဲ့ FX အပါအဝင် client များအတွက် New York နဲ့ဗန်ကူးဗား။
နယူးနှင့် FuseFX စီမံကိန်းများကိုပြန်လာ:
သားတော် တစ်စူပါပါဝါတစ်ခုတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကရေနံအင်ပါယာ၏သွေးထွက်သံယိုတက်နှင့်အကျတစျဆငျ့ကိုပြောသည်အဖြစ် Phillip Meyer ဝတ္ထုပေါ်တွင်အခြေခံ, (ယခု AMC အပေါ်တင်ဆက်), အမေရိကတိုက်ရဲ့မွေး multi-မျိုးဆက်မော်ကွန်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကိုးကွယ်ရာ (ယခု Starz အပေါ်တင်ဆက်!) ဟောင်း con, အရိပ်မွန်းနှင့်တကယ်တော့ဘုရား Odin သူလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လူစိမ်းအကြောင်းကိုနီးလ် Gaiman အားဖြင့်ဝတ္ထုပေါ်တွင်အခြေခံတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဒရာမာဖြစ်ပါတယ်။
13 အကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့် (ယခု Netflix အပေါ် streaming) သတ်သေ commits နှင့်သူမ၏အတန်းဖော်များအဘို့နောက်ကွယ်တွင်အရွက်အသံတိပ်ခွေသူတစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားအကြောင်းကိုနက်နဲသောအရာတခုကိုစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။
လီဂငျြတပျဖှဲ (ယခု FX အပေါ်တင်ဆက်), schizophrenia ရောဂါခံရပြီးနောက်သူသည်အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တွေ့ရှိသူကို။ တစ်ပူပလုလင်ကို ပတ်သက်. အံ့ဩခြင်းဇာတ်ကောင်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်ပါသည်
ရန်ငြိုးထားခြင်း (ယခု FX အပေါ်တင်ဆက်) မျက်နှာပြင်ဒဏ္ဍာရီ Bette Davis ကနဲ့ Joan ခရော၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး, ၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်၎င်းတို့အကြားသညျထသောပဋိပက္ခ အဘယ်အရာကိုအစဉ်အဆက်ကလေးဂျိန်းမှဖွစျခဲ့သလဲ
အသံ Lounge ဟာရောနှောဖို့ Pete Crimi ကိုအားပေးအားမြှောက် - ဇူလိုင်လ 13, 2018
တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် Visual Effects	2017-06-13
ယခင်: 2021 အားဖြင့်ပိုက်လိုင်းလွှမ်းမိုးထားသောဗီဒီယို!
နောက်တစ်ခု: အငယ်တန်း Analyst,
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "FuseFX နယူးတီဗီစီးရီးနဲ့အတူ Hot ရှိနေမည်" ။ http://www.broadcastbeat.com/fusefx-stays-hot-with-new-tv-series/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။